Yona 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Yona bɔɔ mmɔden sɛ obeguan afi Yehowa anim (1-3)
Yehowa maa mframa kɛse bi bɔe (4-6)
Yona nti na mframa kɛse no bɔe (7-13)
Wɔtow Yona too ɛpo a ɛrehuru no mu (14-16)
Apataa kɛse bi menee Yona (17)
1 Yehowa ka kyerɛɛ Amitai ba Yona*+ sɛ: 2 “Sɔre kɔ Niniwe+ kuropɔn no mu, na ka atemmusɛm kyerɛ kurom hɔfo, efisɛ wɔn amumɔyɛ abedu m’anim.” 3 Nanso Yona guan fii Yehowa anim de n’ani kyerɛɛ Tarsis, na osian kɔɔ Yopa, na ohuu po so hyɛn bi a ɛrekɔ Tarsis. Enti otuaa ka foro kɔtenaa mu sɛ ɔreguan Yehowa na ɔne wɔn akɔ Tarsis. 4 Na Yehowa maa mframa kɛse bi bɔ faa po no so, na ahum kɛse bi tui, na hyɛn no yɛe sɛ ɛrebɛbɔ. 5 Ná hyɛn no mu adwumayɛfo suro paa, enti obiara su frɛɛ ne nyame sɛ ɔmmoa no. Na wofii ase yiyii nneɛma a ɛwɔ hyɛn no mu tow guu po no mu sɛnea emu bɛyɛ hare.+ Nanso Yona de, na wasian akɔhyɛ hyɛn* no ase baabi ada hatee. 6 Ɛnna hyɛn no mu panyin kɔɔ ne nkyɛn kobisaa no sɛ: “Adɛn nti na woada? Sɔre frɛ wo nyame ɛ! Ebia nokware Nyankopɔn no behu yɛn mmɔbɔ na yɛanwuwu.”+ 7 Afei wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Momma yɛmmɔ ntonto+ na yenhu nea wama mmusu yi aba.” Enti wɔbɔɔ ntonto, na ɛbɔɔ Yona.+ 8 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛsrɛ wo, ka kyerɛ yɛn: Hena na wama mmusu yi aba yɛn so? Adwuma bɛn na woyɛ, na ɛhe na wufi? Ɔman bɛn so na wufi, na kurow bɛn so na wufi?” 9 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Meyɛ Hebrini, na mesom* Yehowa, ɔsoro Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɛpo ne asaase no.” 10 Bere a ɔkaa saa no, nkurɔfo no bɔɔ hu kɛse paa, na wobisaa no sɛ: “Dɛn na woayɛ yi?” (Ná nkurɔfo no nim sɛ ɔreguan Yehowa, efisɛ na waka akyerɛ wɔn.) 11 Enti wobisaa no sɛ: “Dɛn na yɛnyɛ wo na ɛpo no ano adwo ama yɛn?” Saa bere no, na po no gu so ara rehuru denneennen. 12 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma me so na montow me nto po no mu, na ano bedwo ama mo, efisɛ minim sɛ me nti na ahum kɛse yi aba mo so.” 13 Nanso mmarima no bɔɔ mmɔden sɛ wɔde hyɛn no bɛfa ahum no mu aba mpoano, nso wɔantumi efisɛ na mframa no rebɔ hyia wɔn denneennen. 14 Afei wofii ase su frɛɛ Yehowa sɛ: “O Yehowa, yɛsrɛ wo mma yennwuwu esiane ɔbarima yi nti!* Mfa mogya a enni fɔ ho asodi nto yɛn so, efisɛ wo Yehowa, nea ɛsɔ w’ani na woayɛ yi!” 15 Ɛnna wɔmaa Yona so tow no too po no mu, na ɛpo no dwoe. 16 Na nnipa no suroo Yehowa papaapa,+ enti wɔbɔɔ afɔre maa Yehowa, na wɔhyehyɛɛ bɔ. 17 Na Yehowa maa apataa kɛse bi bae bɛmenee Yona, na Yona dii apataa no yam nnansa, awia ne anadwo.+
^ Ɛkyerɛ, “Aborɔnoma.”
^ Anaa “po so hyɛn a ɛte sɛ aborosan.”
^ Anaa “misuro.”
^ Anaa “esiane ɔbarima yi kra nti!”